ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး တတိယနေ့ ကျင်းပပြုလုပ် ~ Myaylatt Daily.
ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး တတိယနေ့ ကျင်းပပြုလုပ်
မကွေး ဖေဖော်ဝါရီ ၂၆
ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး တတိယနေ့ကို (၂၆.၂. ၂၀၁၆) ရက်နေ့ နံနက်(၁၀၀၀)နာရီအချိန်တွင် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ခန်းမ၌ စတင်ကျင်းပ ပြုလုပ်ရာ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှင့် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များတက် ရောက်ခဲ့ကြသည်။
ရှေးဦးစွာ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌက အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ခွင့်ရှိသူ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် (၆၈)ဦးရှိသည့်အနက် (၆၈)ဦးတက်ရောက်၍ (၁၀၀) ရာခိုင်နှုန်း တက်ရောက်သဖြင့် အစည်းအဝေးအထမြောက်ကြောင်းနှင့် စတင်ကျင်းပကြောင်း ကြေညာသည်။
ထို့နောက် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၏ အဖွဲ့ဝင်ဦးရေ၊ တာဝန်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ရပိုင်ခွင့်၊ သက်တမ်းတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များမှ တစ်စုံတစ်ရာ ဆွေးနွေးမှု မရှိသဖြင့် လွှတ်တော်၏အဆုံးအဖြတ်ရယူကာ လွှတ်တော်ကအတည်ပြုကြောင်း လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌက ကြေညာသည်။
၎င်းနောက် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီတွင် ဖွဲ့စည်းမည့် အဖွဲ့ဝင်များ၏အမည်စာရင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များမှ တစ်စုံတစ်ရာ ဆွေးနွေးမှု မရှိသဖြင့် လွှတ်တော်၏အဆုံးအဖြတ်ရယူကာ လွှတ်တော်ကအတည်ပြုကြောင်း လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌက ကြေညာသည်။
ဆက်လက်ပြီး မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီတွင် ဖွဲ့စည်းတာဝန် ပေးအပ်မည့် ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အတွင်းရေးမှူးတို့၏ အမည်စာရင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များမှ တစ်စုံတစ်ရာ ဆွေးနွေးမှုမရှိသဖြင့် လွှတ်တော်၏အဆုံးအဖြတ်ရယူကာ လွှတ်တော်ကအတည်ပြု ကြောင်း လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌက ကြေညာသည်။
ထို့နောက် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၏ အဖွဲ့ဝင်ဦးရေ၊ တာဝန်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ရပိုင်ခွင့်၊ သက်တမ်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များမှ တစ်စုံတစ်ရာ ဆွေးနွေးမှုမရှိသဖြင့် လွှတ်တော်၏အဆုံးအဖြတ်ရယူကာ လွှတ်တော်ကအတည်ပြုကြောင်း လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌက ကြေညာသည်။
၎င်းနောက် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးဆိုင်ရာကော်မတီတွင် ဖွဲ့စည်းမည့် အဖွဲ့ဝင်များ၏အမည်စာရင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များမှ တစ်စုံတစ်ရာ ဆွေးနွေးမှုမရှိသဖြင့် လွှတ်တော်၏အဆုံးအဖြတ်ရယူကာ လွှတ်တော်ကအတည်ပြုကြောင်း လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌက ကြေညာသည်။
ဆက်လက်၍ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးဆိုင်ရာကော်မတီ တွင် ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်မည့် ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အတွင်းရေးမှူးတို့၏ အမည်စာရင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လွှတ်တော် ကိုယ်စား လှယ်များမှ တစ်စုံတစ်ရာဆွေးနွေးမှုမရှိသဖြင့် လွှတ်တော်၏အဆုံးအဖြတ်ရယူကာ လွှတ်တော်ကအတည်ပြု ကြောင်း လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌက ကြေညာသည်။
မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ စိစစ်ရေးကော်မတီကို အဖွဲ့ဝင်(၉)ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းရန် လျာထားမှုစာရင်းကို လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌက လွှတ်တော်သို့ တင်ပြရာ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များမှ တစ်စုံတစ်ရာဆွေးနွေးမှုမရှိသဖြင့် လွှတ်တော်၏အဆုံးအဖြတ်ရယူကာ မကွေးတိုင်း ဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ စိစစ်ရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းမှုကို လျာထား တင်ပြချက် များအတိုင်း အတည်ပြုကြောင်း ကြေညာသည်။
ဆက်လက်ပြီး မင်းဘူးမဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)မှ ဦးနေမျိုးကျော်က မကွေးတိုင်း ဒေသကြီး အတွင်းရှိ မြို့နယ်အချို့တွင် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ(၁၅)ရက်နေ့မှ (၂၀)ရက်နေ့အထိ ကျင်းပခဲ့သော စတုတ္ထတန်းနှင့် အဋ္ဌမတန်းမေးခွန်းများပေါက်ကြားခဲ့သည့် ကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အရေးကြီးအဆို တင်သွင်းရာ မကွေးမဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)မှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ခင်ချိုလတ်က ထောက်ခံ ဆွေးနွေးပြီး လွှတ်တော်က လက်ခံဆွေးနွေးရန် သဘောတူသည့်အတွက် အရေးကြီးအဆိုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆွေးနွေးလိုသည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များရှိပါက ဆွေးနွေးလိုသည့် အကြောင်းအရာကို ဖော်ပြ၍ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၉)ရက်နေ့ ရုံးချိန်အတွင်း လွှတ်တော်ရုံးညွှန်ကြားရေးမှူးထံ အမည်စာရင်း တင်သွင်းနိုင် ကြောင်း ကြေညာသည်။
၎င်းနောက် လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌက မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်အနေဖြင့် မီးဘေးသင့် ပြည်သူများ အား ပေးအပ်လှူဒါန်းရန်အတွက် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်(၆၈)ဦး၏ ၂၆.၂.၂၀၁၆ ရက်နေ့ (၁)ရက်တာ အတွက် ရရှိမည့် နေ့တွက်စရိတ် စုစုပေါင်းငွေကျပ်(၁၃)သိန်း(၁)သောင်းကို သက်ဆိုင်ရာသို့ ပေးအပ်လှူဒါန်းသွားရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားရှိကြောင်း လွှတ်တော်သို့တင်ပြရာ မီးဘေးသင့်ပြည်သူ များအား ပေးအပ်လှူဒါန်းမည့် အစီအစဉ်ကို လွှတ်တော်က အတည်ပြုကြောင်း ကြေညာသည်။
ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး တတိယနေ့ကို (၁၀၂၆) အချိန်တွင် ရပ်နားကြောင်းနှင့် စတုတ္ထနေ့အစည်းအဝေးကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁ ရက် (အင်္ဂါနေ့) (၁၀၀၀)နာရီအချိန်တွင် ဆက်လက်ကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်း လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကကြေညာ၍ အစည်းအဝေး ကို ရုပ်သိမ်းခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။